हामीले यसरी भेट्यौं गंगामाया चेपाङलाई |
हामीले यसरी भेट्यौं गंगामाया चेपाङलाई
प्रकाशित मिति :2018-11-22 14:08:41
रक्सीराङ गाउँपालिका चेपाङवस्ती सरीखेतकी बाह्र वर्षीय गंगामाया प्रजाले कक्षा ४ मा पढ्दा पढ्दै गत माघमा भागेर विवाह गरिन् । अहिले उनको ८ महिनाको गर्भ छ । ६ जना भाइ बहिनी, दाजु भाउजु गरेर उनको संयुक्त परिवार छ ।
चरम गरिवी र दुखमा रहेको गंगामायाको परिवारलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या छ । यस्तो अवस्थामा गर्भावस्थामा रहेकी गंगामायाले पोषिलो खानेकुरा र जाडोमा न्यानो कपडा कहाँबाट पाउनु ? कक्षा ३ सम्म मात्र पढेका रञ्जीत चेपाङसंग प्रेमपछि भागेर विवाह गरेकी गंगामायाको परिवारले बताए अनुसार गंगाका श्रीमान रञ्जीत चेपाङको उमेर १८ वर्ष छ ।
गंगामायालाई रिङटा लाग्ने, ज्वरो आउने, वान्ता हुने भएपछि असार महिनादेखि उनी माइतीमा बस्दै आएकी छन् । विवाह लगतै काम गर्ने शिलशिलामा गंगाका श्रीमान काठमाडौं आएपछि उनी सम्पर्कविहीन भए । तर, केही समयपछि गंगामायाकी आमाले रञ्जित चेपाङलाई भेटेपछि उनले भेट्न आउने आश्वासन त दिए तर भेट्न आएका छैनन् ।
समकोण कार्यक्रममा गंगामाया चेपाङ
कसरी आइन् गंगामाया समकोणको सम्पर्कमा ?
समकोण टेलिभिजनले हरेक शुक्रबार कान्तिपुर टेलिभिजनमा पिछडिएका, प्रभावित तथा सीमान्तकृत महिलाका समस्या तथा सवालहरुमा कार्यक्रम प्रशारण गर्ने गरेको छ ।
यसै क्रममा समकोण टेलिभिजन टिमले चेपाङ महिलाका वास्तविक सवाल तथा समस्याहरुलाई उजागर गर्ने, नीति निर्माता तथा महत्वपूर्ण सरोकारवालाहरुसंग बहस तथा पैरवी गर्ने र प्रभावित तथा समस्यामा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउने अभिप्रायले चेपाङ जातिको बाहुल्यता रहेको मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने निर्णय ग¥यो ।
सोही अनुरुप समकोण टेलिभिजन टिम (सञ्चारिका समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा समकोण टेलिभिजनकी निर्देशक निर्मला शर्मा, कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी न्यौपाने, अनुसन्धानकर्ता सुजाता ढुंगाना तथा गोपाल गर्तौला) र पत्रकार शीव कुमार काशीसहितको टोली चेपाङ महिलाका समस्या तथा सवालहरुको खोजी गर्ने अभिप्रायका साथ २३ असोज, २०७५ का दिन राक्सीराङ गाउँपालिकाको पलाँसे पुगेको थियो ।
अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि राक्सीराङ गाउँपालिकामा समकोण टेलिभिजन समूहले छलफल तथा व्यक्तिगत अन्तरवार्ता गर्यो ।
चेपाङ महिलाका स्वास्थ समस्याको अध्ययन तथा खोजी गर्ने क्रममा अनमी सन्तोषी अधिकारीसंग समकोण समूहले अन्तरवार्ता लिएको थियो । सन्तोषी अधिकारीले नै गंगामायाको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
जानकारी पाए लगतै सन्तोषी अधिकारीसहित समकोण टेलिभिजन टोली पलाँसे वडा नं ३ बाट १ घण्टा हिंडेर गंगामायाको माइतीघर पुग्यो । गंगामायाको अवस्था अध्ययन गरेपछि २५ असोज २०७५ का दिन चेपाङ महिलाका अवस्था तथा समस्याका बारेमा प्रदेश नं. ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलको उपस्थितिमा हुन लागेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा आफ्ना समस्याहरु बताउन समकोण टेलिभिजन टिमले आग्रह गरेपछि गंगामाया कार्यक्रममा आउन राजी भइन् ।
यसरी गंगामायाले २५ असोज २०७५ का दिन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल तथा राक्सीराङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला हिमडुङ अतिथि तथा मुख्यवक्ता रहेको समकोण टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत आफ्ना समस्या सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तत्पश्चात हेटौंडाका पत्रकार र विभिन्न पत्रपत्रिकाले उनको समस्यालाई उजागर गरेपछि गंगामायाको समस्या भाइरल भएको थियो ।
सरकारको सह्रानीय कार्य
गंगामायाको समस्या सार्वजनिक भएपछि धेरै संघसंस्थाहरुबाट उनलाई सहयोग गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको थियो । उनको समस्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले पनि चासो देखाएपछि उहाँकै निर्देशनमा गंगामाया चेपाङलाई सुरक्षित रुपमा सुत्केरी गराउन मंसिर ४ गते काठमाडौं ल्याइएको छ ।
राक्सीराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल र उपाध्यक्ष निर्मला हिमडुङको पहलमा गंगामायालाई हेटौंडा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिएपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइएको हो । हाल गगांमाया थापाथली प्रसुती गृहमा छिन् । कलिलै उमेरमा गर्भवती भएकीले चिकित्सकको निगरानीमा सुत्केरी गराउनुपर्ने उपचारमा रहेका डाक्टरहरु बताउँछन् ।
गंगामायाका श्रीमान काम गर्ने शिलशिलामा केही समय सम्पर्क विहीन रहेको भनिए पनि अहिले उनी सम्पर्कमा छन् र गंगामायालाई भेटिसकेका छन् ।
उचित शिक्षा र वालविवाह अन्त्यको खाँचो
सरकारले गंगामायाप्रति गरेको सहयोग सह्रानीय छ । यद्यपि राक्सीराङ गाउँपालिकाको यो एउटा मात्र समस्या होइन । गंगामाया त प्रतिनिधि पात्र मात्र हो ।
राक्सीराङ गाउँपालिकामा यस्ता हजारौं गंगामाया कलिलै उमेरमा विवाह गरी विकराल स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने गरेका छन् भने बालविवाह गरेकै कारण विवाहपश्चात् विचैमा पढाइ छाडी अन्धकार भविष्यतर्फ उन्मूख छन् ।
यसर्थ चेपाङ बालबालिकाको उचित शिक्षा र बालविवाह अन्त्यमा सरकारले ठोस् पहल गरोस्, शुभकामना ।
गंगामाया चेपाङकी आमासँग समकोण टेलिभिजनकी निर्देशक निर्मला शर्मा ।
समकोणको छायांकन कार्यक्रममा गंगागामाया ।
गंगामायाका भाईबहिनीसँग लेखक ।